TOP 10 vidiyo nke nkpuru kachasi ike Echefula ha! - ULLER
TOP 10 vidiyo nke nkpuru kachasi ike Echefula ha!
Ịdọ aka ná ntị: Naanị maka ndị NATOS, ndị hụrụ onwe ha n'anya.
Mmetụta a na-apụghị imeri emeri na-abịa, ị na-eche ka ifufe na-agafe ihu gị ... ọbara na-agbapụta nke ukwuu, adrenaline na-agba ọsọ n'ime ahụ dum, na uche na-elekwasị anya n'otu ebumnuche: iru njedebe nke ọdịda ahụ.
Ndị a bụ ụfọdụ n'ime mmetụta uche ndị ezigbo freeriders na-enwe mgbe ha na-agbadata ọsọ ọsọ.
Anyị chọrọ ka ị chegharịa mmetụta ndị dị n'okpuru na nhọrọ anyị nke ụmụ 10 kachasị:
Onye ọkpọka ọkpọ ọkpọ Amerịka bụ nwanyị mbụ sonyere na ihe nkiri n'okpuru aha Teton Gravity Research.
Relive Angel adrenaline na-agbada n’otu ugwu nke Juneau, Alaska tinyere Sage Cattabriga-Alosa, Ian McIntosh na Dana Flahr.
Ọ na-ekwu na n'oge ọdịnala ahụ, ọ si na mpaghara nkasi obi ya pụta ma tinye ikike ya n'ule.
Onye France Xavier De Le Rue akwụsịbeghị ịtụnanya na ikike dị egwu ya iji nọgide na-emeri ugwu mgbe ugwu. Mmasị ya bụ ịga ngwa ngwa na ibu. De Le Rue ejirila mee ihe karịrị ihe onye ọ bụla na-agba ịnyịnya nwere ike.
Na vidiyo ahụ, onye nọ na snowboarder na-eche oke ọdịda n'akụkụ ugwu Haines na Alaska, na-achọ ihe oyiyi kachasị mma na gbaa.
Nwa ugwu nke Polish dị afọ 32 bụ Andrezj Bargiel nwetara ihe yiri ka ọ gaghị ekwe omume na 2018: ọdịda zuru oke nke mita 8.611 nke K2, nke abụọ kachasị elu na ụwa mgbe Everest, nọrọ ọtụtụ izu na ụkwụ nke Himalayan to mee elu ugwu.
A na-akpọkarị K2 "ugwu na-egbu egbu" ma ọ bụ "ugwu ọhịa" n'ihi nsogbu ndị ọ na-eweta.
Iji mee ka ọdịda a, Bargiel na ndị otu ya ga-eji nlezianya mụọ ụzọ kacha mma iji drones.
Echere na oge kachasị njọ na nke siri ike nke afọ 2014. The American Cody Townsend anatawo ntụ ntụ ntụ n'otu afọ ahụ na Salt Lake City na Best Sky Line, nke na-amata ndị egwuregwu egwuregwu kachasị mma kachasị mma, maka ọdịda nke ịgba ọsọ nke Tordrillo elu Na alaska.
Na vidiyo ị ga - ahụ etu Cody si gbadata na kilomita 75 kwa elekere, na-agbada n'okporo ụzọ dị egwu na-agafe ugwu ahụ dum. Ogologo a were 30 nkeji oge.
Richard Permin, Markus Eder na Cody Townsend, 2015
Ndị na-agba ọsọ egwuregwu Richard, Markus na Cody na-enwe ọmarịcha ọsọ iji tufuo, ebe ha na-etinye nka ha n'ule dị egwu.
Best Freeride Ski Lines 2019
Mkpokọta nke kacha mma freeride skai ahịrị 2019. Malite na Hakuba, Japan na Arianna Tricomi na Markus Eder. Mgbe ahụ gaa n'ihu na-agba ịnyịnya, Canada na Craig Murray na Jacqueline Pollard.
Na Fieberbrunn, Austria na Hedvig Wessel na Markus Eder. Gaa n'ihu na Ordino Arcalís, Andorra na Leo Slemett na Jaclyn Paaso. N'ikpeazụ na njedebe na Verbier, Switzerland na Elisabeth Gerritzen na Wadeck Gorak.
Soro onye na-agba John Jackson na-agba ịnyịnya ya gburugburu ugwu dị na Alaska. Vidio nke na-achikota ahụmịhe ya niile, n'ụzọ dị adị n'ezie na ọ na-akpọ gị òkù ka ị nwalee otu n'ime ala kachasị ike n'ókèala Alaska.
Nchịkọta vidiyo nke ụmụ ala dị egwu nke Owen Leeper na Jackson Hole, United States.
Echiche na njegharị na vidiyo ahụ na-adọrọ uche nke narị otu narị ndị egwu, na-enye ya ebe ma na-abawanye ewu ewu na ụwa snow.
Bode Miller, “Nnụnụ ndị na-eri anụ” iko mba ụwa
Vidio ahụ bụ ilele anya n’aka Bode Miller na mgbago ọsọ zuru oke site na “Nnụnnụ Njọ” iko mba ụwa.
Terje Håkonsen, Alaska, afọ 90
Nkpuru a enweghi ike iwepu aha anyi!
Onye Nootu nke ndi snow, Terje Håkonsen, lere anya dika onye nke kachasi nma site na snowboarders nke oge nile na onye okike nke ikuku nke Haakon Flip.
Ọ bụ vidiyo nke dị kemgbe ọtụtụ afọ, mana ọ bụ kpochapụwo nke anyị nwere mmasị ịtụgharị. Enwere ike ịsị na Terje bụ snowboarder kachasị mma na akụkọ ntolite, maka ihe nketa ya na-enweghị atụ.
Ọ bụrụ na ndepụta anyị masịrị gị ma nwee vidiyo ndị dị jụụ nke agbụrụ dị oke ala, kekọrịta ha n'okpuru na nkwupụta. Cheta soro anyị na netwọkụ anyị @Ugbondu na-enwe ihe videos dị ka ndị a.
Ihe omume egwuregwu na asọmpi kachasị nke 10
Chọpụta asọmpi egwuregwu kacha mma kachasị na Europe na ụwa! E nwere ọtụtụ njem njem na ụwa, site na strangest na nke mbụ, na nke kachasị,